Na-achọ Sugar papa [Sites Mmemme Mmekọ Mmammy Mama]? »Sugarlove®
Na-achọ Sugar papa [Sites Mmemme Mmekọ Mmammy Mama]?
Onye na-ede akwụkwọ By Admin
Deeti ụbọchị November 11, 2019
2 Comments na Achọ Nchọgharị Sugar [Ọrịa saịtị mama mama na-agba ara?
Companylọ ọrụ nwoke mara mma dị ka nhọrọ kacha amasị ọtụtụ ụmụ nwanyị. Ọ bụ ya mere na ọtụtụ n'ime ha na-achọ ịnọnyere shuga papa ha. Ihere anaghị eme ụmụ nwoke nke okenye na a hụrụ ha n'ihu ọha ụmụ shuga, n'adịghị ka ndị mmadụ iri abụọth narị afọ. Omume a aghowo nke oma nke na obuna umunwanyi ndi okenye na acho enyemaka site na ebe ima ezi shuru. Ebumnuche bụ inweta ụmụ nwoke maka ụmụ nwoke na ntụrụndụ.
You bu nwanyị ma ọ bụ nwa okorobịa na-achọ nkwado ego na akụrụngwa nke onye meworo agadi, onye kwudokwa na onye ọzọ? Babybụ nwa afọ shuga bụ otu n’ime nhọrọ kachasị mma ị nwere. Mgbe ị na-achọ mmekọrịta nna nwere shuga, nwanyị kwesịrị ịmara na ọ bụghị ụdị mkpakọrịta nwoke na nwanyị. Enwere ụfọdụ nkwekọrịta ọ ga-adịrịrị ka ị na-enweta uru na-akparaghị ókè nke na-abịa na nhazi ahụ.
Uru dị na ịchọrọ mmekọrịta mmekọrịta nna nna
The uru ndi mmadu lookingchọ maka nnabata shuga papa gị bụ na gị na ndị nne na nna nwere shuga. Kedu onye ga elekọbara mkpa ego gị na ihe anụ ahụ anya. Uru ọzọ a na-enweta bụ na enwere ohere dị elu nke ndị okenye karịa ndị okenye. Ha enwekwaghị mmasị na egwuregwu. Ha ma ihe ha chọrọ n’aka nwa shuga ha.
Dịka nwa shuga, ị ga-enwekwa oge buru ibu iji mee ihe ị hụrụ n'anya. Ego na akụnụba maara ihe kpuchie gi. Kedu nke zuru oke, maka ị nwere ike ịchụso ihe omume ntụrụndụ gị niile wee ga - eme njem gbakwunyere mmụta. Ihe a niile ka ị na-enwe ọ ,ụ na onye gị na ya meworo agadi, nke gbasiri ike ma nweekwa ihe ọmụma. Also ga-enwekwa ahụ erughị ala ka ị na-ebi ndụ okomoko n’agaghị agbasi mbọ ike maka ya.
Ofzọ nke ịchọpụta Mmekọ Mkpakọrịta na Nkpakọrịta
You na - achọ ịkekọrịta ndụ gị ma nwee ahụmịhe bara ụba na nne na nna Sugar, onye nwere nnukwu akụ? Mgbe ahụ enwere ngwa na weebụsaịtị dị iche iche maka ndị mmadụ na-achọ mmekọrịta nna. Saịtị mommy mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bara uru, n'ihi na ha na-enye otu ọrụ maka nwoke na nwanyị.
Mụ shuga kwesịrị ịmasị mma n ’aka ha, iji nweta mkpakọrịta ha na-achọ. Nke mbụ, ha nwere ike ịdebanye aha na saịtị nna shuga ma ọ bụ sugar mummy mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-achọ ọmarịcha ụmụ agbọghọ mara mma nwere agba. Ezubere mmekọrịta mmekọrịta shuga dị mma maka ụmụ ọhụrụ Sugar mara mma na ndị nne na nna Sugar nwere ego.
Ka ị na-achọ nnabata shuga ma ọ bụ mkpakọrịta mammy, ịchọta nke ziri ezi nwere ike ọ gaghị adị mfe. Ikwesiri ịnọgidesi ike n'ihe ị na-achọ, sonyere ọtụtụ shuga papa na mama shuga mummy mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Chọọ maka ndị nwere ike ịchọrọ ịme ntanetị ma mesịa ị ga-ahụ ihe ga-abara gị uru.
Na-achọ Mmekọrịta Daddy papa na imechi ya
Nzọụkwụ mbụ dị mkpa bụ ịmara ọnọdụ gị na ndụ ya. Ndị nne shuga na-eji oge buru ibu na-akpata ego. Pụtara, ha enweghị oge inwe mmekọrịta ịhụnanya ma ọ bụ nke mmetụta uche. Ha chọrọ gị n'anụ ahụ na nkwụghachi, ha na-enye ego na akụrụngwa. Ihe nzuzo iji nọgide na-abụ bụ ihe ntụrụndụ, inwe obi ụtọ ma nwee njigide ọmarịcha anụ ahụ gị. Ọ bụ akụ na ụba obodo hụrụ n'anya. Nke a bụ eziokwu, mana ọ bụghị maka Sugarlove®, ebe ọ bụ na iwere oge maka ezi ịhụnanya na mmetụta bụ ihe kacha mkpa.
Are na-achọ shuga, mgbe na-etinye aka na nzuzo na mmekọrịta chiri anya? Ya mere, agwala onye nke ọzọ na nna gị shuga. Ha tụrụ anya na ị ga-alụ di na nwunye ọ bụrụgodị na ihe niile ha na-enye bụ mkpa anụ ahụ ka ị na-egbo ha afọ. Iguzosi ike n’ihe dị ha mkpa. Agbanyeghị, anyị na Sugarlove® bụ ndị anyị na Soulmate na-ejikọ, yabụ na ọ dịghị mkpa ime ndo mgbe ị na-eji nyiwe anyị.
Ebe Mmekọ Mmekọahụ Na-adị Mkpa Siri Ike?
Imirikiti saịtị shuga mama mammy nwere nhọrọ maka mmekọrịta nwoke na nwoke na nwanyị. You bụ nwa nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ ma nwee mmasị na mmekọrịta bara uru ego, gaa na saịtị ahụ. Uru ego na akụrụngwa bụ otu ihe ahụ ụmụ nwanyị na-eto eto na-achọ ka ha na-achọ mmekọrịta nna nwere shuga.
Saịtị ndị a bụ nanị maka ndị nwere shuga. Ha bụkwa ebe akọwapụtara. Iji maa atụ, are na-achọ saịtị shuga mammy dị na ya? Updebanye aha na obodo gị ga-enye gị ohere dị elu ịnweta ihe ị na-achọ. Na mgbakwunye na saịtị ahụ, jiri ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị iji jikọta ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị okenye na ụmụ nwoke bara ụba karị.
Ihe ndị dị mkpa ịtụle ka ị na-achọ shuga
Ekwela tinye aka na sugar daddy na sugar mummy mkpakọrịta nwoke na nwaanyị saịtị! Buru n’uche na mkpakọrịta nwoke na nwanyị ejikọtaghịrị maka ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị meworo okenye. Nke a bụ n'ihi usoro ọrụ ha na nkwa ndụ ha. Inwe olile anya di elu na ihunanya na ihunanya nwere ike butere anyi ihe nwute. Mee ka uche ghe oghe, mgbe ị na-achọ mmekọrịta nna. Cheta na enyere ego na akụrụngwa ike ịnye ọfụma karịa ịnweta obi ike. May nwere ike ị gaghị enwete mmụọ ma ọ nweghị ihe dị njọ na ịchọ enyemaka ego, ihe okomoko na ahụmịhe.
Ekwesiri ịtụle nkwado nke mmekọrịta ahụ. Achọrọ ụmụ shuga ka ha gbanwee ndụ ha n'ụzọ ga-ebute ọdịmma shuga nna ha ma ọ bụ mkpa shuga dị mkpa. Ọtụtụ ndị Sugardater ahapụla ma ọ bụ zoo mmekọrịta ịhụnanya ha. Ọzọkwa, ha na-ewepụta oge iji soro di ma ọ bụ nwunye ha ha ochie nwee nzukọ ma ọ bụ nke ndị enyi na ndị òtù ezinụlọ na-eche ihu na azụ. Ọtụtụ Sugardaters kwesịrị ịchọpụta afọ ole ha dị njikere ịnagide ụdị mmekọrịta a. Ogologo oge ole ka ihe ndị a ga-enyere ha aka.
N'ihi ọdịdị a na-adịghị ahụkebe nke ụdị mmekọrịta ndị a, ndị mmadụ nwere ike imeghachi omume na -agwute ọkwa nwa shuga gị. Mgbe ị na-achọ shuga papa shuga ma ọ bụ mmekọrịta mamma, nọrọ n'akụkụ ndị na-akwado ma na-akpali ndụ. Jiri ihe omuma ndi nyere aka mee ka mmuta shuga, nna, na nnema ghara idi nma. Nke a na-emetụta onye ọ bụla na-achọ shuga papa na mama mommy mkpakọrịta.
Tags Otu ntanetị ntanetị narị ntanetị narị, Sugar Daddy / Sugar Mama / Sugar Baby & Sugardaters
← Nweta Mama Mama, mama & sugar Daddie #1 [Nzukọ ọgbakọ] → Sugardaddy & Sugarmummy [Zute Ebe Ntanetị Na Ntaneti]
Ihe e zaghachiri na “Na-achọ saịtị shuga papa m [saịtị saịtị mama mama na-agba ume?]”
November 20, 2019 na 12: 17 am
Ana m achọ ọmarịcha nnukwu mammy iji mee ka afọ ju afọ ojuju n'olu m na-arụ ọrụ ebube
November 20, 2019 na 12: 18 am
Mepụta profaịlụ nke gosipụtara gị na ụkpụrụ “KỌLỌR along” yana agụụ anụ ahụ agụụ onye chọrọ gị ka ọ ga-emerịrị. Cheta ka i dee nkọwa banyere ihe dị na ngalaba “Banyere M” n'ihi na ndị nwere ike ịtụ akwụkwọ na-agụ ya. Ego gị na nsogbu ndị ọzọ dị na ya adịghị mkpa, ebe ọ bụ na isi ihe gị na-elekwasị anya bụ "Uche, Ahụ & Mkpụrụ Obi". Soro maka “UGBUA” n'efu site na imepụta akaụntụ!
zaghachiSite Post Onye edemede